နားရင်းချက်ဖို့ ဟင်းတချို့ | Food Magazine Myanmar
ဧပြီလမှာတော့ ဆရာမဒေါ်နန်းစန်းစန်းအေးက ‘ငါးပုပ်ခြောက်ခရမ်းချဉ်သီးအရည်သောက်’ အပါအဝင် ဟင်းလျာအတွဲအစပ် (၇)မျိုးကို စီစဉ်ထားပါတယ်။
အဆိုပါ ဟင်းလျာအတွဲအစပ်များကတော့ –
၁။ ငါးပုပ်ခြောက်ခရမ်းချဉ်သီးအရည်ဆမ်း၊ ပိန္နဲသီးသုပ်၊ မုန်ညင်းဟင်းရည်၊ ပဲပုပ်ထောင်း၊
၂။ ပုစွန်ကျော့ ငရုတ်ပွဆီပြန်၊ ပဲကြီးနှပ်၊ မုန်လာရွက်ချဉ်ရည်၊ ဆီးဖြူသီးငါးပိထောင်း၊
၃။ အမဲသားအာလူးဟင်း၊ မျှစ်ချဉ်ပေါင်ရည်ကျို၊ ရေချို ငါးပိကြော်၊ အတို့စုံ
၄။ ကြက်သားကြော်နှပ်၊ ခရမ်းချဉ်သီးငါးပိချက်၊ တမာရွက်အတို့၊ ဘူးသီးဟင်းခါး၊
၅။ ဝက်သုံးထပ်သားဟင်း၊ ကန်စွန်းရွက်ချဉ်ရည်၊ ပုစွန်ကြော် ငရုတ်သီးငါးပိကြော်၊ ပဲပုစွန်သုပ်၊
၆။ ဆိတ်သားမွကြော်၊ ဒန့်သလွန်သီးအချဉ်ဟင်း၊ ဂျူးမြစ်သုပ်၊ ငါးပိရည်ဖျော်၊
၇။ ကဏန်းပျော့ချဉ်စပ်၊ ပန်းထုပ်အစိမ်းကြော်၊ အာလူးကြာဆံဟင်းရည်၊ ငရုတ်သီးကြော်ထောင်း၊
အဆိုပါ ဟင်းလျာအတွဲအစပ် (၇)မျိုးထဲမှ ငါးပုပ်ခြောက် ခရမ်းချဉ်သီးအရည်သောက်၊ ပိန္နဲသီးသုပ်၊ မုန်ညင်းဟင်းရည်၊ ပဲပုပ်ထောင်းတို့ကို တင် ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။
‘ဒီသင်္ကြန်မှာ တို့တွေ ဘာလုပ်ကြမလဲ’
‘ခရီးသွားတာ ပိုမကောင်းဘူးလား . . .’
‘သင်္ကြန်တွင်း ခရီးမသွားချင်ဘူး။ ဟိုတယ်ခလည်း ဈေးကြီး၊ အစားအသောက်ဆိုလည်း ဘယ်ဆိုင်မဆို လူတွေတိုးပြီး အဆင်မပြေလှဘူး . . . ‘
‘ကမ်းခြေတစ်နေရာမှာ အစားအသောက်ရော၊ တည်းခိုဖို့ပါ အဆင်ပြေတဲ့ နေရာသွားကြမယ်လေ . . . ‘
‘အေး . . . ကမ်းခြေလေ ပိုဆိုးလေပဲ။ အရင်က တစ်ခန်းတစ်သိန်းဆို အခု နှစ်သိန်းတောင်းမှာ . . . ‘
‘ဘာဖြစ်လဲ . . . သူတို့လည်း ပွဲတော်ရက်တွေမှာပဲ များများတောင်းလို့ရတာ။ ဒီ့ပြင်ကြားရက်တွေဆို ဝန်ထမ်း စားရိတ်ရအောင်တောင် မနည်းလုပ်ရတာမျိုးရှိတယ်တဲ့’
‘သိလှချည်လား။ ဘယ်တုန်းက ကွင်းဆင်းထားတာလဲ . . .’
‘ကမ်းခြေမှာ သူငယ်ချင်းပိုင်တဲ့ ဟိုတယ်ရှိတယ်လေ။ သူပြောပြလို့ သိတာ. . . ‘
‘အဲ့ဒါ မင်းကို ကြိုတင်ပြီးလာရင် အလကားတည်းလို့မရဘူး။ မကိုက်ဘူးလို့ ပြောတာနေမှာ . . .’
ပြီးတော့ ကိုယ်ဘယ်သူ့ဆီကမှ အလကားယူလေ့ မရှိဘူးဆိုတာ သူသိပြီးသားပါ။ လုပ်ငန်းတွေကို စိတ်ဝင်စားလို့ ရှင်းပြတဲ့သဘောပါ။ ကမ်းခြေက ဟိုတယ်မပြောနဲ့ မန်းရွှေစက်တော်တည်းခိုဆောင်တွေကမှ ပိုဆိုးသေးတယ်။ ဘာဝန်ဆောင်မှုမှ မပါဘူး။ ခြောက်ပေ ကိုးပေတစ်ခန်းကို တစ်ညခုနစ်သောင်း၊ ရှစ်သောင်းပေးရတာ၊ ပွဲတော်ရက်ဆို သိန်းကျော်ဆိုပဲ၊ အခန်းတွေက ထရံကာဇလီသပ်ကြမ်းခင်းတွေနဲ့ ဘာလို့ ဒီလောက်ဈေးကြီးရတာလည်းလို့ မေးကြည့်တော့ လေလံခတွေက တစ်ဆင့်တစ်ဆင့် လက်ဆင့်ကမ်းရောင်းချကြ၊ တည်းဆောင်တစ်ဆောင်ကို ၁၂၅ သိန်းအထိ ပေးကြရတော့ ကိုက်အောင် လုပ်ကြရတာပါတဲ့။ ရွှေကြိုလို့ခေါ်တဲ့ ဧည့်ကြိုတွေကိုလည်း တစ်ရာသီ ခုနစ်သိန်းရှစ်သိန်း ဝန်းကျင်ပေး ရပါသေးတယ်တဲ့။
‘မှတ်သားလောက်ပါပေတယ်။ ဒါဆို သင်္ကြန်တော့ ဘယ်မှမရွေ့ဘဲ အိမ်မှာ စာလေးဖတ်ပြီး ပြည့်ပြည့်ဝဝ အနားယူရင် အကောင်းဆုံးနေမှာ’
‘စားစရာတွေ ပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့ ချက်ရင်းပြုတ်ရင်း သင်္ကြန်သီချင်းတွေ နားထောင်ရင်း ကျော်ဖြတ်ကြတာ ပေါ့။
အတည်ပြုပြီးရင် စမ်းသပ်ကာလ ငါးပုပ်ခြောက် ဟင်းလေးချက်ကြရအောင်။
ငါးပုပ်ခြောက်တစ်ဆယ်သား၊ ရေစင်စင်ဆေးပြီး အသားနေရာကို ဓားရာပေးပြီး ရေနွေးငွေ့နဲ့ ဆယ်မိနစ် ပေါင်းမယ်။ အသားအိပြီး ကျက်ရင် ပန်းကန်ပြားထဲ ဆယ်ထည့်ထားပါမယ်။
ကြက်သွန်နီတစ်ဥ ညက်အောင်ထောင်းပြီး ဆီ စတီးဇွန်းနှစ်ဇွန်းထဲထည့် ဆီသတ်မယ်။ ကြက်သွန် ဖတ်တွေ ရွှေဝါရောင် တောက်လာရင် ခရမ်းချဉ်သီးနှစ်လုံးကြိတ် ခြေထားတာထည့်မယ်။ အရည်ခန်းပြီး ဆီပြန် လာရင် ရေတစ်ဆယ်သား တစ်ခွက်နဲ့အတူ အရသာ လက်ဖက်ရည်ဇွန်းတစ်ဝက်၊ ဆားအနေတော်ထည့်ပြီး ပွက်ဆူလာရင် ပေါင်းထားတဲ့ ငါးပုပ်ခြောက်ထည့်ပါမယ်။ အိုးဆူခါ နီးရင်တော့ နုပ်နုပ်စဉ်းထားတဲ့ ငရုတ်သီးစိမ်းနဲ့ ကြက်သွန်ဖြူ၊ နံနံပင်၊ ကြက်သွန်မြိတ် ထပ်ထည့်လိုက်ပါ။ ငါးပုပ်ခြောက်အစစ်ရဲ့ အရသာလေးလေးပင်ပင်နဲ့ ခရမ်းချဉ်သီး၊ ငရုတ်သီးပေါင်းစပ်ထားတဲ့ ဟင်းတစ်မယ်ပေါ့။
ဟင်းအရံအတွက် ပိန္နဲသီးသုပ် သုပ်ပါမယ်။ ပိန္နဲသီးတစ်ထုပ် ဆယ့်ငါးကျပ်သား လောက်ရှိပါမယ်။ ရေစင်စင် ဆေးပြီး၊ ပထမတစ်ရေ ပွက်ပွက်ဆူအောင်ပြုတ်ပြီး ရေသွန်ပါ။ နောက်တစ်ရေထပ်ထည့်ပြီး ထပ်ပွက်ပြီး ထပ်သွန်ပါအုန်း။ ဈေးထဲမှာ ရောင်းတဲ့ ပိန္နဲသီးတွေမှာ ချွတ်ဆေးတွေ ပါနေလို့ပါ။ ကိုယ့်အပင်က အသီး၊ ဒါမှမဟုတ် အလုံးလိုက်ဝယ်ပြီး ချက်မယ်ဆိုရင်တော့ ပိုစိတ်ချရပါတယ်။ အခွံနွှာ မမည်းအောင် ရေစိမ်ပြီး နူးအောင်ပြုတ်ရုံပါပဲ။
ပိန္နဲသီးပြုတ်တွေကို လက်နဲ့အသာဖွရင်း ကြက်သွန်ဖြူဆီချက်၊ ခရမ်းချဉ်သီး အနှစ်၊ မြေပဲမှုန့်၊ နှမ်းလှော်၊ ဆား၊ အရသာ၊ ကြိုက်တတ်ရင် ပဲပုပ်အမှုန့်လေးထည့်ပြီး သမသွားအောင် နယ်လိုက်ပါ။ ပိန္နဲသီးသုပ်ဖြစ်ပါပြီ။ လတ်ဆတ်တဲ့ ပိန္နဲသီးရဲ့ အရသာနဲ့ဆို အသားသုပ်တစ်မျိုးလို အရသာရှိပါတယ်။
ဟင်းရည်အတွက် ထိုင်ဝမ်မုန်ညင်းလို့ခေါ်တဲ့ မုန် ညင်းကို ငါးကင် (သို့) ငါးကြော်အခတ်တစ်မျိုးနဲ့ ချက်ပါ မယ်။ ရေတစ်လီတာထဲကို ကြက်သွန်ဖြူဓားပြားရိုက် ငါးတက်၊ ခရမ်းချဉ်သီးတစ်လုံး၊ ငါးအသား၊ ချင်းလက် တစ်ဆစ်အခွံခွာ ဓားပြားရိုက်နဲ့ ပွက်ဆူအောင် တည်ပြီး ဆား၊ အရသာအနေတော်နဲ့ မုန်ညင်းပင် သုံးပင်နဲ့ဆို ဟင်းရည်သောက်ဖြစ်ပါပြီ။ အရေသောက်ဟင်းတွေအားလုံးရဲ့ အရသာဟာ ပူနွေးဆူပွက်မှုပေါ်မှာ ငါးဆယ်ရာခိုင် နှုန်းလောက် မူတည်ပါတယ်။
ပဲပုပ်ထောင်းအတွက် ရှမ်းပဲပုပ်စေ့အခြောက်ကို မီးအေးမှာ လှော်ပြီး ကြက်သွန်ဖြူ၊ ငရုတ်သီး၊ ဆားနဲ့ ရောထောင်းတာပါ။ အလွန်လွယ်ပါတယ်။ ပဲပုပ်စေ့ အခြောက်မရှိရင် ပဲပုပ်ချပ်မီးကင်နဲ့လည်း ထောင်းလို့ရပါတယ်။ ခရမ်းချဉ်သီး မီးဖုတ်နဲ့ ရောထောင်းလည်း အရသာရှိပါတယ်။
သင်္ကြန်တွင်းမှာ ဘယ်မှ ခရီးမသွားဖြစ်ပေမဲ့ ဘာအလုပ်က တာဝန်မှမရှိဘဲ စိတ်လွတ်ကိုယ်လွတ် အိမ်မှာ အနားယူတာလည်း အနားယူခြင်းတစ်မျိုးပါပဲ။
► ငါးပုပ်ခြောက် ခရမ်းချဉ်သီးအရည်ဆမ်း
♦ ငါးပုပ်ခြောက် – ၁ဝ သား
♦ ဆီ – စတီးဇွန်း ၂ ဇွန်း
♦ ရေ – ၁ဝ သားတစ်ခွက်
♦ ပိန္နဲသီး – တစ်ထုပ် (၁၅ ကျပ်သား)
♦ ငါးကြော် – ၁ တုံး
♦ ကြက်သွန်ဖြူ – အနည်းငယ်
♦ ခရမ်းချဉ်သီး – ၁ လုံး